गोलमा कमजोर खेलाडी, जवाफमा आक्रामक प्रशिक्षक बंगलादेशसँग कस्तो होला?
ऋग्वेद शर्मा शुक्रबार, चैत १३, २०७७, १३:१५
काठमाडौं- २०७१ चैतमा विश्वकप छनोटमा भारतसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले ६ वर्षपछि दशरथ रंगशालामा खेल्यो। मंगलबार विश्वकप छनोटकै तयारी मानिएको ‘थ्री नेसन्स कप’मा कीर्गिस्तानको यु २३ टिमसँग गोलरहित बराबरी खेलेको नेपाली टिमको प्रदर्शन अपेक्षाकृत भएन।
विपक्षीको पोस्टमा दर्जनौँ आक्रमणको अवसर खेर फालेको नेपाली टिमको प्रदर्शनले प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन भने सन्तुष्ट छन्। त्यो उनमा देखिएका सन्तुष्टि होइन, खेलाडीको बचाउमा ‘भनिएको’ सन्तुष्टि हो।
मैदानमा खेलाडीको कमजोर आक्रमणपछि पनि उनीहरुको बचाउमा प्रशिक्षक महर्जन खुब आक्रामक देखिए। ‘६ वर्षपछि राष्ट्रिय टिमले खेलेको हो, तीन महिनाको तयारी कस्तो रह्यो भन्ने बुझ्ने अवसर पनि थियो। मैत्रीपूर्ण खेल जस्तो भएकाले पनि परीक्षण गरिएको हो। खेलाडीले मेरो निर्देशनअनुसार नै खेले। म सन्तुष्ट छु’ खेलपछि प्रशिक्षक महर्जनले सुनाए।
राष्ट्रिय टिममा अहिले जो छन् ती नेपालका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् र आफ्नो निर्देशन मैदानमा राम्ररी प्रयोग भएको भन्नेमा उनले बारम्बार जोड दिए। तर उनले खेलपछिको प्रश्नउत्तरमा जे भने त्यस्तो मैदानमा भने देखिएन। नेपालको कमजोर प्रदर्शनलाई लिएर उठिरहेको प्रश्नमा उनले ‘गोलमा परिणत गर्नुपर्ने अवसर खेर जानु’ कमजोरी भएको बाहेक अरु विषय स्वीकार्न चाहेनन्।
‘अवसर धेरै नै बनाएका हौँ तर खेल जित्ने गोल हुन सकेन। अब अझ सुधार गरेर राम्रो नतिजा ल्याउने हो। मैले जुन टिम ल्याएँ त्यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छु। यो अहिले नेपालका उत्कृष्ट खेलाडीको समूह हो। नेपालको उत्कृष्ट टिम हो। खेलअनुसार हुनुपर्ने पाँच\_छ गोलमा भने हामी चुकेका हाैं,’ उनले भने, ‘फरवार्डले धैर्य देखाउन नसक्दा गोलमा कमी रहेको बताइरहेका प्रशिक्षक महर्जनले कमजोरीको अरु पाटो भने खोतल्न चाहेनन्।’
विश्वकप छनोटका लागि सुरुवाती अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई अभ्यास खेलका रुपमा अर्थ्याउने प्रयासमा लागिरहे। आफूले सुरुवाती टिममा समावेश गरेका खेलाडी र युवा टिमविरुद्ध बनाएको रणनीति बारे भने उनले कुनै कमजोरी देखेनन्। पहिलो हाफमा नै आधा दर्जन जति गोलका अवसर खेल फालेको नेपाली टिमले दोस्रो हाफमा पनि उही कमजोर अवस्थालाई निरन्तरता दियो।
दर्शक जुर्मुराउने हरेक गोलका अवसर खेल गइरहँदा पनि प्रशिक्षकले बताएको सन्तुष्टि फुटबलका लागि नौलो नै हो। भलै टिमको अवस्थामा सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने उनले आन्तरिक रुपमा पनि बुझेकै होलान्।
प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि बंगलादेश र कीर्गिस्तान यु २३ टिमको पहिलो खेललाई हेरेर आफूले रणनीति बनाउने प्रशिक्षक महर्जनले बताएका थिए। ‘पहिलो खेल हेरेर टिमलाई कसरी बढाउने भन्ने रणनीति बनाउनेछु। हामी राम्रो खेल खेल्ने कुरामा ध्यान दिनेछौँ। राम्रो खेलपछि नतिजा त अवश्य पनि आइनै हाल्छ,’ उनले भनेका थिए। तर कीर्गिस्तानसँगको खेलपछि उनैले भनेजस्तो बल पोसेसनमा मात्र खुसी हुन सक्ने स्थिति थिएन।
राम्रो खेलको निर्णय आखिर नतिजाका आधारमा नै हुने हो। ‘विश्वकप छनोट खेलको तयारीका रुपमा नै यसलाई लिएका छौँ,’ भनेर उनले बारम्बार दोहोर्‍याए पनि थ्री नेसन्स कपको उपाधि नै नेपाली टिमको लक्ष्य हो। त्यसमा सबैसँगै प्रशिक्षक पनि स्पष्ट नै छन्। बंगलादेश र कीर्गिस्तान यु २३ टिमको खेल हेरेपछि कीर्गिस्तानले सोचेजस्तो नखेलेको बताएका महर्जनले उही टिमविरुद्ध राम्रो नतिजा दिन सकेनन्। ६७ औँ मिनेटमा १० खेलाडीमा झरेको युवा टिमविरुद्ध राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शनमा प्रशिक्षकबाहेक अरु खुसी हुन सकेनन्।
कीर्गिस्तानसँगको खेल हुने एक दिनअघि २३ सदस्यीय राष्ट्रिय टिमको घोषण हुँदादेखि नै टिम छनोटबारे प्रश्न उठिरहेको थियो। ए डिभिजन लिग, कोभिडकै समयमा बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेललगायतमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा खेलाडी छनोट नदेखिएको असन्तुष्ट थिए। त्यही असन्तुष्टि कीर्गिस्तानविरुद्ध सुरुवाती ११ मा छानिएका खेलाडीलाई लिएर पनि देखियो।
कीर्गिस्तान यु २३ सँगको पहिलो खेल जितेर बंगलादेशसँगको दोस्रो खेलमा गर्न सकिने प्रयोगलाई प्रशिक्षकले कमजोर बनाए। दोस्रो खेलमा जितको दबाब बढ्दा उनले आफ्नो प्रयोगलाई निरन्तरता दिन कठिन हुनेछ। त्रिदेव गुरुङ र सन्जोग राईको प्रयोगमा उठेको प्रश्नमा प्रशिक्षक महर्जनले उनीहरुको उत्कृष्ट खेल नै आधार भएको दोहोर्‍याए। ५९औँ मिनेटपछि सुजल श्रेष्ठ र ७४औँ मिनेटपछि भरत खवास मैदानमा गए पनि उनीहरुको अनुभव देख्न सकिएन।
टिम छनोटका विषयमा उठेको प्रश्नमा आक्रामक देखिएका प्रशिक्षक महर्जनले प्रश्न रोक्ने हिसाबले मात्र बनावटी प्रतिप्रश्नको जवाफ दिए, ‘टिम कस्तो हुनुपर्ने हो? तपाईंले खोजेको जस्तो हुनुपर्ने हो?’ राष्ट्रिय टिममा मुख्य प्रशिक्षक रहँदा रहँदै वैशाख ११ देखि सुरु हुने नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौं रेजर्स एफसीको प्रशिक्षक बनेका महर्जनले खेलाडी छनोटमा त्यसैलाई आधार बनाएको आरोप पनि लागिरहेको छ।
फेन्चाइज लिगका लागि काठमाडौं रेजर्समा एन्फाकै पदाधिकारीको हालीमुहाली पनि नेपाली फुटबल नीतिमा नसुहाउँदो नै देखिन्छ। राष्ट्रिय टिममा काठमाडौं रेजर्सका विकेश कुथु र तेज तामाङ राष्ट्रिय टिममा नियमित भए पनि सन्जोग राई र त्रिदेव गुरुङ पहिलोपटक समावेश गरिए। प्रशिक्षकले भनेजस्तो राष्ट्रिय टिममा यी दुईको उपस्थितिकै खेलकै आधारमा गरिएको भए पनि मैदानमा त्यो देखिएन। सुजल श्रेष्ठ, विशाल राई र सुनिल बल जस्ता अनुभवी र मैदानमा लय देखाएका खेलाडीभन्दा बढी विश्वास उनले त्रिदेव र सन्जोगप्रति देखाए। भलै त्यो नौलो प्रयोग मात्रै किन नहोस्।
बंगलादेशसँग कस्तो होला?
थ्री नेसन्स कपमा नेपालको बंगलादेशसँग शनिबार बेलुका साढे ५ बजे हुने खेलमा नौलो प्रयोगका लागि बाटो देखिँदैन। बंगलादेश र नेपाल दुवैले विश्वकप छनोटका लागि तयारी प्रतियोगिता भनिरहे पनि उपाधिका लागि दुवै टिमले लक्ष्य बनाएकै छन्। पहिलो खेलमा बंगलादेश र कीर्गिस्तान यु२३ लाई १–० ले हराएकाले बंगलादेश फाइनल पुगिसकेको छ। त्यसैले दबाब नेपालमाथि नै हुनेछ। साढे ३ हजार दर्शक उपस्थित कीर्गिस्तानविरुद्धको खेलले बंगलादेशसँग शनिबार हुने खेलमा दर्शकको संख्या बढ्ने नै देखिन्छ।
नेपालसँगको खेलपछि कीर्गिस्तानका प्रशिक्षक जोलदोसोभ नुर्बेकले नेपालले ‘डायनामिक’ फुटबल खेलेको हुँदा बंगलादेशभन्दा राम्रो रहेको बताए पनि नेपालको गोलको कमजोर अवस्था सधैँको निरन्तरता हो। आफूहरुको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहकाले नुर्बेकले नेपाल र बंगलादेशले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खेल भावनाअनुरुप नै खेल्ने आश रहेको समेत बताए।
नेपाल र बंगलादेशको अहिलेसम्म २५ खेलमा भेट भएको छ। जसमध्ये बंगलोदशसँग नेपाल १४ खेलमा पराजित भएको छ। ७ खेलमा नेपालले जित्दा ४ खेलमा बराबरी खेलेको छ। नेपालले पछिल्लो समयमा सन् २०१८ मा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशलाई उसैको भूमिमा २–० गोलले पराजित गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेको छ। २०२० को नोभेम्बरमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल घरेलु टिम बंगलोदशसँग २–० गोलले हारेको थियो।
त्यसपछि दोस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। ‘अब हामीले अंक गुमाउनु हुँदैन। कीर्गिस्तानसँगको खेलले आत्मविश्वास बढेको छ, प्रशिक्षक महर्जनले भनेका छन्,’ ‘गोल भएन भन्ने मात्र हेर्नु हुँदैन, बल पोसेसन हेर्नुपर्छ। खेलमा दिएको दबाब हेर्नुपर्छ। गोलमा देखिएको कमि सुधारेर अब हामी बढ्नेछौँ।’ आफू सन्तुष्ट रहेको बताइरहँदा उनले कीर्गिस्तानविरुद्धको खेलको सुरुवाती ११ भन्दा बंगलादेशविरुद्ध केही खेलाडी परिवर्तन हुनसक्ने पनि बताए।
एनएसएल : ललितपुरले फाइनल प्रवेशका लागि काठमाडाैंसँग भिड्ने ललितपुर सिटी एफसी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि काठमाडौं रेजर्ससँग भिड्ने भएकाे छ। बुधबार, वैशाख २९, २०७८
ईएसएल : बार्सिलाेना, रियल र युभेन्ट्समाथि युईएफएकाे अनुसन्धान सुरु, दुई वर्ष प्रतिबन्धकाे खतरा सुपर लिग अप्रिल १८ मा घोषण गरिएकाे थियाे। तर, साेही दिनदेखि याे विवादमा पर्न थाल्याे। फुटबलको विश्व प्रशासकीय निकाय फिफाले प्रतिस्पर... बुधबार, वैशाख २९, २०७८